On 6/19/2019 (IST)
Bilowgii bisha Juunyo 2019 ayaa dad aad u tira badan waxay barteen labadan shaqsi kadib markii ay soo badhigeen guurka labaad ee Abu Abdullah, tabcan guurka noocan ah sharci daro ayuu ka yahay UK, gabadha lala guursaday Ruksana waa shaqsi ay ku tilmaamtay in ay saaxiib yihiin oo la yiraahdo Sarah, waxaa lasoo ogaaday in guurkan uu dhacay laba sano ka hor , iyagoo baraha bulshada ku soo bandhigay dhowr maalmood ka hor.
Sawirka hoose waxaad ku aragtaan ACCOUNTS INTSGRAM kala duwan oo ay lahayd Ummxabdullah (Ruksana Ali)
2018 accountka hoose waxaad ku aragtaan HasanatFamily, Sarah ma waxay ka mid ahayd qoyska Abu Abdallah Hasanat?
Waayo bartamihii bisha Juunyo 2019 waxay INSTGRAMKA ku soo qoreen in laba maalmood ka hor ay is guursadeen.
Guurka labaad markii ay faafiyeen ayaa dad badani waxay is weeydiiyeen su'aalo ah in ummxabdullah ay tahay shaqsiyad ku nool laba nolol oo isbar-bar socota, waxaa isla markaa cadaatay in Ruksana Ali (ummxabdullah) ay tahay MODEL INSTGRAM oo isticmaasha magaca @ zarrahofficial, iyadoo marar badan sawiradeeda iyo waxyaabaha kale ee ay soo geliso ku TAAG gareysay Ummxabdullah.
17 Maarso 2019 iyo 20 maarso 2019 waxaa la xaqiijiyay in sawiro isku meel laga qaaday, iyagoo markaa dalxiis u joogay caasimada Qadar magaalada Dooxa, taasoo xaqiijisay shakigii jiray.
Waxaa kale oo INSTGRAM lagu arkay laba sawir oo isla Hotelka ay degan yihiin lagu qaaday.
Waxaa kale oo laba ACCOUNT INSTGRAM (ummxabdullah - zarrahofficial) kala duwan isla waqti la soo geliyay BAASBOOR iyo TIKIT ay ugu dhoofayeen DOOXA.
Sawir kale iyadoo isticmaaleysa isla telefoonka gacanta, sawirka midig waa QAAWAN oo jirkeeda ayaa la arkaa sidaa awgeed ayaa loo qariyay.
Sawir kale waxaan ku aragnaa wiilka ay dhashay ummxabdullah oo ku dhexjira sawirada zarrahofficial .
Qaar ka mid ah sawiradeeda oo lays bar-bar dhigay.
Waxaa kale oo la soo ogaaday in ay lahady ganacsi MODEL AGENCY ah oo ku taalay STOKE -ON-TRENT oo ku taala Waqooyiga wadanka Ingiriiska.
Labada Sawir waxay isla xiran yihiin hal FARAANTI ama FARGASHI
Iminka waxaa xaqiiq ah in ummxabdullah and zarrahofficial ay yihiin hal ruux, taasoo ah ummxabdullah oo dhowrkii sano ee BARAHA BULSHADA ay ku jirtay BEEN ABUUR ku waday dhamaan dadka daba socday ee mooday in ay tahay qof aanu ahayn.
Daawo gabadhii la isticmaalay oo BEENTA loo sheegay oo RAALI GELIN bixineysa.
Sawirka hoose waa kii ugu dambeeyay oo laga qaaday, iyagoo si dhuumaaleysi ah kaga dhoofayey gegida diyaaradaha ee MANCHESTER oo ku sii jeeda ISTANBUL, Bileyska Ingiriiska ayaa raadinaya iyagoo lagu eeday in ay lunsadeen lacag dhan 450.000 USD oo magac mucaawino ah ay ku uruuriyen.